Android TV pane yako Raspberry Pi. Zvakakosha here kuita? | Linux Vakapindwa muropa
Haisi chakavanzika chatingaite chero chinhu neRaspberry Pi. Kunyangwe isiri iyo yega, bhodhi iri diki rinotibvumidza isu kuva nekombuta yedesktop komputa, yevhidhiyo mutambo emulator, seti-yepamusoro bhokisi kana kuita ese marudzi emapurojekiti. Pakati peanoshanda masisitimu atinogona kuisa tinayo Chrome OS, yatinofanira kushandisa Etcher software iyo inotibatsirawo ku gadza Android TV mundiro imwe chete.
Muchikamu chino isu tichatsanangura maitiro ekushandura yedu Raspberry Pi pane Android TV, asi isu tiri kuzopa maonero edu pazviri. Zvakakosha? Sei? Uye isu tinofanirwa kutora zvese kufunga, tichitanga nemutengo uye, wadii?, Kupedzisa dhizaini. Nekuti isu zvakare tinofanirwa kuyeuka kuti iyo RP4 ine simba kupfuura mavhezheni apfuura, asi zvakare inopisa kupfuura hanzvadzi dzayo. Uye, kutaura nezve yazvino vhezheni yebhodhi, rutsigiro haruna chokwadi.
2 Maitiro ekuisa Android TV pane yako Raspberry Pi
La mhinduro yekukurumidza ingave yekuti kwete. Icho chikonzero ndiwo mutengo: kuisa Android TV muRaspberry Pi isu tinofanirwa kutenga bhodhi, magetsi, tambo yekuibatanidza kune iyo yekutarisa uye kadhi re MicroSD. Izvo ndezve padiki nepadiki, nekuti isu tinogona zvakare kukutengera iwe kesi, kuwedzera kune yekupisa inonyura. Kune mapakeji ayo anosanganisira fan. Tichifunga nezvekuti chinangwa chedu ndechekuganhurira mashandisiro ayo kuApple TV uye kuti pane zvishandiso zvinozvisanganisira nekutadza pamutengo wakaderera, hazvina basa.
Asi hongu inogona kuikodzera mune imwe yezviitiko izvi:
Isu tatova neimwe uye hatizive zvekuita nayo. Kana isu tiine Raspberry Pi yakamira padyo nezvose zvinodiwa kuti iite kuti ishande uye isu hatizive zvekuita nayo, isu tatozviita. Kuichinjira kuita set-yepamusoro bhokisi ne Android TV ingori imwezve sarudzo.
Tichaishandisa nguva nenguva. Ini ndinotaura izvi nekuti kuchinja kubva pakushandisa chimwe kuenda pane chimwe kunogona kuve nyore sekutora kadhi rimwe uye kuisa imwe. Zviripachena kuti kana tikazviita kakawanda pazuva, pakupedzisira kadhi rinogona kutyoka, asi zano ringave rekuisa mune microSD ine Android TV uye toshandisa iro kadhi patinenge tichida kushandisa Raspberry yedu seApple TV.
Zviite nekuda kwekuti tinogona.
Maitiro ekuisa Android TV pane yako Raspberry Pi
Isu tatove tatsanangura tichitaura nezvemutengo iyo Rasbperry Pi ndiro, hapanazve, uye kuti tiite chero chinhu chatinofanira wedzera zvinhu mairi. Ini handikurudzire kutenga Raspberry Pi kuti ushandise neApple TV, asi zvinofanirwa kutaurwa kuti zvirinani tinoda ndiro, magetsi, tambo yeHDMI kuti ibatanidze kune yekutarisa uye chimwe chinhu chinoshanda sekuraira, icho chinogona uve mbeva kana mutongi weBluetooth. Kana isu tiine zvese, maitiro ekuisa Android TV pane Raspberry Pi angave anotevera:
Takaburitsa vhezheni yeLineageOS yeedu Raspberry Pi kubva Iyi link. Sezvauri kuona, inoti "Raspberry Pi 3", zvinoreva kuti rutsigiro runongovimbiswa neiyo vhezheni yebhodhi.
Isu tinoisa iyo inoshanda sisitimu ne Balena Etcher:
Tinoisa kadhi muverengi.
Takatanga Balena Etcher.
Isu tinosarudza iwo mufananidzo watakatora pasi padanho rekutanga.
Isu tinosarudza chinhu chakanangwa (kadhi redu).
Uye tinodzvanya pa «Flash».
Tinomirira kusvikira maitiro apera.
Tevere, isu tinoisa iyo kadhi mune yedu Raspberry Pi. Zvatichaona mushure mekutanga LineageOS yakati siyanei zvishoma pane izvo zvinopihwa neakatanga Android TV.
Nhanho inotevera kurodha pasi Open GApps. Isu tichazviita kubva kuRaspberry Pi nekuwana Iyi link, tichisarudza chikuva chedu (ARM mune iyo RP3), iyo vhezheni yeApple yatiri kushandisa uye, pakupedzisira, iyo Open GApps package yatiri kuda. Chinhu chakakurudzirwa ndeye tvstock.
Kuisa iyo Open GApps isu tinofanirwa kuenda kune yekuvandudza sarudzo (kana Mushambadzi, zvinoenderana nemutauro urinoratidzwa) Zvirongwa / ruzivo rwefoni / Vaka nhamba / gadziriso yesarudzo. Tinovamutsa.
Iye zvino tinoenda kuMidzi Yekushandisa uye kumisikidza iyo Apps uye ADB sarudzo.
Mune inotevera nhanho, isu tinovhura iyo yekushandisa system terminal uye yekutanga mhando "su" uyezve "rpi3-recovery.sh", ese asina makotesheni, kuti apinde kugadzirisa mamiriro.
Isu tinotangazve kuti script imhanye.
Kana pakanga pasina matambudziko, iyo Recovery Console (TWR) ichaonekwa. Tinofanira kusarudza "Isa".
Tevere, isu tinotsvaga iyo nzira yatakatora pasi iyo ZIP yeOpen GApps uye isu tinosarudza iyo. Haufanire kuisunungura, asi sarudza sarudzo "Tangazve mushure mekuisa" uye sarudza sarudzo "Isa ZIP".
Mushure mekutanga kwekutanga, izvo zvatinozoona ichave yave Android TV vhezheni yeLineageOS ine Open GApps, saka isu tinofanirwa kungonakidzwa nayo.
Wakashandura yako Raspberry Pi kuita Android TV? Nekuda kwekuda kuziva: nei wafunga kuzviita iwe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Maitiro ekushandura yako Raspberry Pi kuita Android TV. Asi zvakakosha here?
Mune ino kesi, ini ndatenga iyo Pi4, ndedzipi sarudzo dzinokwezva dzingave nekutsigirwa?
Mhoro Carlos. Kubva pamaonero angu, Raspbian. Iyo yakakwana sisitimu yekushandisa uye nayo unogona kuita zvese zvese. Kana iyo dzidziso yekuwana Netflix kana Amazon Prime kubva kubhurawuza ichikupa matambudziko, unogona kuwana iwo masevhisi naKare. Iwe unogona zvakare kuisa emulators emutambo, asiri iwo eiyo Android asi zvakare anoshanda. Iwe unogona zvakare kuisa Ubuntu shanduro, asi pachezvangu handifarire mashandiro anoita zvese. Uye mamwe masisitimu akadai seChromium OS, kana iyi kubva kuApple TV, iyo memory memory ndeye 4GB yakakwira, saka ini ndinokurudzira Raspbian (inotora mukana wese nzvimbo pane yekutanga kadhi) kusvikira Ubuntu ichivandudza rutsigiro rwayo, rwandinofunga kuti runofanira kutanga. pamwe negadziriro yekumisikidza.
Kana iwe ukakwira raspbian, kutarisa Netflix kuburikidza nebhurawuza kwakafanana nekufamba makore gumi munguva yakapfuura. Handifunge kuti mazuva ano hakuna munhu anoda kuona Netflix nekuvhura webhu browser.
kana ukashandisa tax yeNetflix (uye yakafanana) kanganwa kuzviita neaspbian. Kodi yakaiswa neruoko neap apt haitsigire inoenderana yekuisa rwizi kuti iwe usazokwanisa kutarisa Netflix, HBO, nezvimwe.
Kana iwe uine rasipiberi 4 uye uchida kushandisa aya akaderera ekushandisa mavhidhiyo, UNOGONA kuenda kuLibreelec (ndinofunga openelec yakatosvibira). OSMC (iyo yakavakirwa pa raspbian) haisati yaburitsa vhezheni inoenderana ne raspberry pi 4, uye kubva pane izvo zvinoita sekunge ichaenda kure.
Ini ndaneta nekurwa nezvose kuti ndione Netflix hafu zvakanaka uye ndachinjira kuTV bhokisi. Iyo raspibheri yekukanganisa nayo, mu multimedia ivo vanoramba vachipa chiuru kutendeuka.
Pablo ini handizive ipapo asi kwemwedzi Kodi inotsigira iyo yekupfunga kwemhepo Iyo yakapusa Kodi addon.
Ndine rasipiberi 4 uye rasipiberi os (yekare raspybian) uye ndinogona kuona Netflix neAmazon Prime naKodi (vachishandisa zvavo zvisiri pamutemo addons ... izvo zvandinoda zvishoma pane zviri pamutemo Android tv apps).
Muchokwadi ndirikufunga kuisa Android tv pane raspibheri asi ndinofanira kunyatsotarisisa ... ndinoda kuti ive seiri rasipiberi OS App uye kwete seiyo yakazara OS, nekuti ini ndinoshandisa iro raspibheri kune zvimwe zvinhu sevha .
SaPablo, Rpi haishandisirwe multimedia kune vanhuwo zvavo, multimedia chete uye zvishoma neNetflix, ibasa rakawanda kune zvishoma izvo zvinopa. Kune izvo, seti pabhokisi yatove kuita uye kurudyi, imwe ye45-55 madhora anorova Rpi. Kana iyo Android, ehe, kana zvisiri kana iri Raspbian, isiri inowedzeredza
Hapana vamiririri, kana mashoma, kana iwe ukaisa Raspbian, vhura Firefox, kuti upinde Netflix, zvinoita kunge zvakaomarara zvekuti ne Android TV yatogadziriswa.
Yakanaka iyo script yekumisikidza mune terminal ndeye rpi3-recovery.sh, kuti ubude kunze kwekupora iwe unofanirwa kukwirisa bhuti partitions uye ini handirangarire mumwe mutengesi, wobva waenda kune yekudzosera terminal uye woita iyi "rpi3-recovery.sh boot "wobva watangazve, kungo typing reboot kuchashanda
Ndinokutendai zvikuru ndakamhanyira mudambudziko iro
FRANCISCO JESU akadaro
Izvo hazvina kukosha, yazvino vhezheni haienderane neNetflix, mazhinji maapplication haashande kana kunamatira, inononoka uye inotyisa, kunyangwe iwe waive nekusvetuka. Zvekutarisa mafirimu uye imwe Kodi, hapana chinhu chiri nani kune iyo Pi.
Pindura kuna FRANCISCO JESU
NaMwari, ini ndinoita zvese sekutaura kwako asi pandinotangazve zvinondidzorera kupora zvakare, ndingaite sei kuti ndive neTV TV?
Anodiwa, pane kukanganisa mumirairo yakagovaniswa, mune poindi 13 iwo murairo wekutangazve muTTRP ndi "rpi3-recovery.sh" pane kukanganisa pavanoisa hyphen panzvimbo yenguva.
Hazvigoneke kubuda kunze kwekupora, hazvishande nekuchenjerera kuti usaite kudzamara kugadzirisa dambudziko
Mubvunzo: Maitiro ekuita boot kubva kuTWRP kupora?
A: Unogona kuendesa iyo yakafanana script muTWRP terminal (Yepamberi-> Yekupedzisira) kana iwe uine bhuti uye system zvikamu zvakaiswa (Mount-> Boot & Mount-> System):
Ndokunge, kubva pakupora, tanga waenda ku MOUNT uye sarudza BOOT uye SYSTEM (kuwedzera kune DATA, iro rinotosarudzwa). Wobva waenda kuAdvansised, sarudza TERMINAL uye unomhanya:
Tangazve SYSTEM uye, mushure me (yakati rebei) mirira kumisikidzwa, iwe unenge uine yako Android TV,
Gabriel akasiya mhinduro pamusoro. Ini ndinodudza:
«Zvakanaka, iyo script yekumisikidza mune terminal ndeye rpi3-recovery.sh, kuti ubude kunze kwekupora iwe unofanirwa kukwirisa bhuti partitions uye ini handirangarire mumwe mutengesi, wozoenda kune yekudzoreredza terminal uye woita iyi" rpi3- recovery.sh boot "Uye wozotangazve, kungo typing reboot kuchaita"
Tangazve SYSTEM uye, mushure me (yakati rebei) mirira kumisikidzwa, iwe unenge uine yako Android TV.
Imwe chaiyo, iyo raspbrerri pi 3 haigone neye tvstock pack. Izvo zvinongoshanda neipamusoro gapps.
Ndine urombo nekusaziva kwangu asi nhanho yechinomwe handikwanise kuzviita !!
Nzira yekuvhura sei terminal kubva ku raspberry? probe ctrl alt t semuenzaniso pakati pevamwe vakawanda uye hapana ... ini handisi mushandisi wepamberi nenzira.
Handikwanise kuiwana kuti ishande mune raspi 3. inoramba iri mubhootopu yekusingaperi mushure mekutanga kwehupenyu. inomhanya kusvika yaratidza iyo yakazara lineageOS logo uye ipapo bhodhi reboots.
Ndakaedza neiyo ver. 15 uye 16 yemadzinzaOS.
bhodhi rinoshanda zvakanaka, iyo microsd nyowani. Ndakaikwenya, ini ndinoshandisa icho chimwe chinhu uye ini ndaida kuyedza izvi
zvakadaro. Ini ndicharamba ndichitsvaga dzimwe sarudzo.
Nahueri wokuMupata akadaro
Iwe unofanirwa kudhonza negonzo kubva pasi pechidzitiro chikuru kumusoro. Ikoko iwe uchaona ese maapplication akaiswa pane iyo android, kusanganisira Terminal.
Pindura Nahuel del Valle
Ini ndasvikawo padanho rekuvhura iyo terminal, asi ini handikwanise kuzviita. Zvinoitwa sei?
Ini pachangu ndiri kufunga kushandisa Raspberry Pi seTV Bhokisi kuti ndikwanise kuwana kure kure kwariri. Ndiri kuda kumisikidza imwe yevabereki vangu asi ndichikwanisa kuwana chishandiso chiri kure nerutsigiro nekuchengetedza.
Ndakaedza nekutengesa senge Xiaomi Mi Bhokisi uye neimwe software senge Teamviewer Host kana Airdroid uye havashande. Chekutanga chinongobvumira kuona kure uye faira kuchinjana, asi hazvibvumidze iwe kudzora chishandiso, uye chechipiri hachishande zvakananga nekuti hachina kugadzirirwa Android TV.
Kunze kwekunge ini ndawana imwe nzira yekutengesa (ini ndichiri kufanira kuyedza imwe software yekudzivirira kure yandakawana uye kunyatso tarisa kana paine imwe yemabhokisi yetv modhi inoenderana neTeviewviewer software yekudzora kure) sarudzo yekuzviita neRaspberry inoita kunge ndiyo imwe chete inogona kushanda.
Firejail, application yekuzviparadzanisa system inosvika neiyo nyowani vhezheni yayo 0.9.62
Yakakodzera nguva manejimendi uchishandisa yemahara software